Basy PA efa tsy misy bala intsony, antsy maranitra ary ody gasy tsy mampipoaka basy no tratra teny amin'ireo jiolahy, niaraka tamina fanamiana mpitandro ny filaminana.
Niaiky ireo jiolahy fa izy ireo no tompon' antoka tamin'ny fanafihana teratany karana teny amin'ny Fokontany Manga sy Mangarivotra ary efa tonga hatrany Maevatanana sy Port Berger.
Dimy lahy izy ireo no mpiaraka ary mbola ifampitadiavana ny namany. Efa nisazy ihany koa ary mpamerin-keloka ireo jiolahy ireo. Manao ezaka mafy ny mpitandro ny filaminana aty Mahajanga satria mahazo vahana indray ny fanafihana mitam-piadiana tato ho ato.